Iifowuni zeHuawei ziya kuyeka ukuba nohlaziyo lwe-Android | I-Androidsis
UGoogle wayeka ukukhupha uhlaziyo lwe-Android lweefowuni zeHuawei
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo kutyhilwe ukuba uDonald Trump wayesele eza kutyikitya umthetho oya kuthintela ukuthengiswa kweefowuni zeHuawei eMelika, ukuba ungafunda kule khonkco. Uphawu lwesiTshayina luvakalise ukuba aluchaphazeleki malunga nalo mlinganiso, ngenxa yobukho bayo obunqunyelwe kwimarike yaseMelika. Nangona kubonakala ngathi iziphumo zenkampani zinokuba mbi ngakumbi. Njengoko UGoogle ulungiselela ukuyeka ukukhupha uhlaziyo ngeefowuni zabo.
Ngenxa yalo myalelo, iifowuni zeHuawei ziya kuthi ulahlekelwe kukufikelela ngokuthe ngqo kuhlaziyo lwenkqubo yokusebenza. Ukongeza, iifowuni ezilandelayo zebrendi ezisungulwe kwintengiso, ngekhe zibe neVenkile yokudlala okanye ezinye iiapp zikaGoogle, ezinje ngeGmail. UKUYAEwe, amajelo eendaba aliqela aseMelika sele exele.
IHuawei iyakulungela le meko, kuba siyazi iinyanga ezilungisiweyo yinkampani eyakho inkqubo yokusebenza. Nangona esi sigqibo sikaGoogle sisibetho esikhulu kuhlobo lwesiTshayina. Ngapha koko, lo mthetho usenokuthetha ukuba iinkampani zaseMelika azizukuthengisa nantoni na kwinkampani yaseTshayina.
Imeko ethi isikhumbuze enye ye-ZTE enamava kulo nyaka uphelileyo, kwaye oko kuyaqhubeka nokusongela ukuba kwenzeke, kuba uDonald Trump sele eyicacisile ngamanye amaxesha ukuba ifuna ukuvimba ukuthengiswa kwezi nkampani zimbini eMelika. Into esesikweni ngalo mthetho ungathandabuzekiyo oneziphumo ezininzi.
Okwangoku asinampendulo ivela kuHuawei kwesi sigqibo sinokwenzeka kuGoogle. UGoogle uqobo akazqinisekisanga ezi ndaba nazo. Okwangoku kukho iingxelo ezahlukeneyo ezivela kumajelo aseMelika akhomba kule meko. Ke ngoko, kuya kufuneka silinde kude kube ngaphezulu kwaziwa malunga noku malunga nokuza kwenzeka.
IHuawei kusenokwenzeka ukuba inyanzelwe ukuba isebenzise eyayo inkqubo yokusebenza. Okanye mhlawumbi kwiinyanga ezimbalwa imeko iya kubuya izole. Nokuba kwenzeka ntoni, Ukungavisisani phakathi kwe China ne United States kuyaqhubeka nokukhula ngezi ntlobo zezenzo. Silindele impendulo evela kwinkampani kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » UGoogle wayeka ukukhupha uhlaziyo lwe-Android lweefowuni zeHuawei